Wasiirada Puntland oo ansixiyay miisaaniyada dowladda ee sanadka 2020 oo lagu qiyaasay $346 milyan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiirada Puntland oo ansixiyay miisaaniyada dowladda ee sanadka 2020 oo lagu qiyaasay $346 milyan
November 19, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Golaha wasiirada Puntland oo gacantaag u sameynaya ansixinta miisaaniyada 2020. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiirada Puntland ayaa fiidnimadii Isniinta ansixiyay miisaaniyada dowladda ee sanadka 2020.
Miisaaniyada 2020 ayaa lagu qiyaasay $346 milyan, taasoo saddex jibaar ka badan tii 2019 oo ahayd $72 milyan.
Miisaaniyada ayaa inteeda badan ku biixi doonta ammaanka iyo arrimaha bulshada sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Wasaaradda Maaliyada ayaa bayaan ay mareegteeda ku daabacday ku sheegtay in dakhliga la filayo in gudaha uu ka soo xaroodo iyo caawimaad dhaqaale oo dibada lagu saleeyay miisaaniyadan, taasoo keentay in ay kor u kacdo odorosku.
Golaha baarlamaanka ayaa ka doodi doona miisaaniyada dhawaan si ay u meelmariyaan.
Madaxweynaha Puntland oo u safray Ingiriiska si uu uga qeybgalo shir-weynaha Soomaalida ee London
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Sabti ah u safray dalka Ingiriiska si uu uga qeybgalo shir-weynaha Soomaalida ee London. Isaga oo saxaafada kula hadlayay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo Madaxweynaha ayaa [...]
Labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay Jubbada Dhexe
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamadda Mareykanka ayaa duqeyn ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab qaaday, oo ay ku dileen labo dagaalyahan, sida ay bayaan ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika. Duqeynta ayaa Isniintii ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka [...]